Cesare Maldini oo xalay geeriyoodey! (Akhri waayihiisa) – Gool FM
Maldini ayaa inta badan waayihiisa ciyaareed ku qaatay camaaliqada Serie A ee AC Milan intii u dhexeeysey 1954 ilaa 1966, isagoo kula guuleystey 4 Scudetti iyo koobkii ugu horreeyey ee uu naadigu ka qaado European Cup 1963-kii, isagoo u saftay in ka badan 400 oo kulan tartamada oo idil. Wuxuu sidoo kale 14 jeer u saftay Azzurri oo uu ku meteley KA62.
Kaddib markii uu ciyaaraha uga fariistay kooxda Torino sanaddii 1967, Maldini wuxuu kusoo laabtay AC Milan oo uu macallin u noqday 1972, isagoo u qaaday Koobka Koobabka iyo Coppa Italia.
Maldini ayaa deeto noqday macallinka Talyaaniga min 1980-86, kahor inta uusan 10 sano kadib misna kusoo noqonnin 1998 oo uu KA98 isagu wadey xulka. Wuxuu sidoo kale macallin usoo noqday Paraguay KA2002.